Antony 7 hividianana ny LEAGOO 5Tc | Androidsis
Antony 7 hividianana ny LEAGOO 5Tc vaovao
Ignatius Room | | Fitaovana Android, Finday
Andro vitsy lasa izay mijery lalina ny LEAGOO S8 izahay, terminal iray mihoatra ny 100 euro izay manome antsika valiny tena tsara ho an'ny vidiny. Ny orin'asa LEAGOO dia nanolotra modely vaovao, ny LEAGOO T5c, kinova nohatsaraina an'ny T5, terminal izay, raha tsy eo ny fitsapana azy dia toa tsara be.
Hatramin'ny 11 desambra ho avy izao dia afaka mividy an'ity terminal ity izahay 99 dolara fotsiny, izay midika fitsitsiana $ 30 mihoatra ny vidiny mahazatra $ 129, ka raha mikasa ny hanavao ny finday finday taloha ianao nefa tsy manambola vola be dia mety fotoana mety izany. Aorian'izay dia hasehoko anao ny antony 7 hividianana ny LEAGOO T5c vaovao
0.1 Sehatra Intel X86
0.3 Fakan-tsary miaraka amin'ny teknolojia SPREADTRUM
0.4 Hafainganana misintona
0.5 Miantso ny feo
0.6 5,5-inch IPS efijery nataon'i Sharp
0.7 Fitaovana fakantsary aloha
1 LEAGOO T5c Famaritana
Sehatra Intel X86
Ny LEAGOO T5c dia tantanin'ny processeur mifototra amin'ny maritrano Intel's Airmont 1,8 GHz misy core 8 64-bit. Ny T5c dia manome antsika hery informatika avo lenta miaraka amin'ny fanjifàna tery tokoa.
Ny LEAGOO T5c dia tantanan'ny SPREADTRUM SC9835I miaraka amin'i Cores 8 amin'ny 1,8 GHz, miaraka amin'ny RAM 3 GB ary tahiry anatiny 32 GB. Ny sary dia Mali-T820, izay manome antsika fampisehoana mahafa-po mihoatra ny.
Fakan-tsary miaraka amin'ny teknolojia SPREADTRUM
Ny fakan-tsarin'i T5c dia manasongadina ny haitao farany SPREADTRUM izay manatsara ny famindrana efitrano roa, mamorona sari-tany lalina mba hahafahan'ny fakantsary fakan-tsary mahazo sary maranitra kokoa eo alohaloha misaraka avy any aoriana, hahazoana vokatra bokeh mazava sy mazava kokoa.
Ny fahombiazan'ny SPREADTRUM SC9853I ambony noho ny MTK Helio P23 ary ambany kely kokoa noho ny Huawei's Kirin 970 sy Qualcomm's Snapdragon 835.
Miantso ny feo
Ny kalitaon'ny antso natao niaraka tamin'ny LEAGO T5c tantanan'ny processeur SPREADTRUM SC9835I eo amin'ny laharana faharoa aorian'ny Kirim 970 Huawei.
5,5-inch IPS efijery nataon'i Sharp
Hatramin'izao, tsy mino aho fa misy olona misalasala momba ny kalitaon'ny takelaka ataon'i Sharp. Ny LEAGOO T5c dia mampiditra a 5,5-inch IPS tontonana misy zoro fijerena 178 degre izay manome loko mazava antsika.
Fitaovana fakantsary aloha
Raha reraka amin'ireo terminal ianao izay tokony hametrahanao ny rantsan-tànanao any aoriana hamoha azy amin'ity modely ity dia tsy hanana izany olana izany ianao satria eo anoloana. Inona koa, ny fizotran'ny famohana dia 0,1 segondra fotsiny.
LEAGOO T5c Famaritana
5.5 efijery SHARP FHD IPS
Spreadtrum SC9853 1.8Ghz processeur, Intel X86 core, 64bit
Fahatsiarovana RAM 3 GB novokarin'i Samsung
32GB fitehirizana anatiny novokarin'i Sandisk
Fakan-tsary fakantsary dual-cam Samsung 13.0 + OV 2.0
Fakan-tsary 5.0 MP eo aloha
Bateria 3050mAH novokarin'ny LG mifanentana amin'ny famahana haingana.
vidiny $ 129.99, fa hatramin'ny 11 desambra ho avy izao dia azonao atao amin'ny $ 99,99 amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Antony 7 hividianana ny LEAGOO 5Tc vaovao
Jereo ny bokotra fanavaozana ny vaovao farany amin'ny Android sasany